ကိုးကန့်အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေသည့် ရခိုင်တပ်မတော်ကို မေးမြန်းချက် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
အရပ်သားအများကို Human-shield လုပ်ခိုင်းခြင်းနှင့် မိုင်းရှင်းခိုင်းခြင်း ( mine – sweeper ) များမှာ စစ်ရာဇ၀တ်မှုမြောက်ပါသည် »
ကိုးကန့်အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေသည့် ရခိုင်တပ်မတော်ကို မေးမြန်းချက်
By ဒီဗွီဘီ 22 February 2015
ကုိုးကန့်နဲ့ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တုိုက်ပွဲတွေမှာ တရုတ်စစ်သည်ဟောင်းတွေ ပါဝင်မှုရှိကြောင်း မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ ပြောဆိုချက်ဟာ လူထုရဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ကုို တဖက်လှည့်နဲ့ အသုံးချနေတာ ဖြစ်တယ်လုို့ အေအေလုို့ ခေါ်တဲ့ ရခုိုင်တပ်မတော် စစ်ဦးစီးချုပ် ဗုိုလ်မှူးချုပ် ထွန်းမြတ်နုိုင်က ပြောဆုိုလုိုက်ပါတယ်။
မြန်မာတပ်မတော်က ဒုတိယဗုိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦးက ကုိုးကန့်တုိုက်ပွဲတွေမှာ တရုတ်စစ်သားဟောင်းတွေက စစ်ရေး အကြံပေး၊ နည်းပြ၊ ကြေးစားစစ်သည် တနည်းနည်းနဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့တဲ့အပေါ် ရခုိုင့်တပ်မတော်ဘက်က တုံ့ပြန်လုိုက်တာပါ။
ရခုိုင့်တပ်မတော်ဟာ ကုိုးကန့်တပ်တွေဘက်ကနေ ပူးပေါင်းတုိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ အဖွဲ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် ထွန်းမြတ်နိုင်ကို ဒီဗွီဘီသတင်းထောက် မျိုးဇော်လင်းက မေးမြန်းထားပါတယ်။
ကုိုးကန့်တိုက်ပွဲမှာ ရခိုင် မပါဘူး။ ရခိုင် မပါဘူး။ မပါဘူး။ ပါဘူး။ ဘူး။
ဟူး ဟူး ဟူး
ရခိုင် လုံးဝ မပါဘူးဗျ။
ကျနော်တို့ တပ်မတော်ကို ယုံကြပါဗျ။
အဖေကြီး တရုတ်လည်း လုံးဝ မပါပါဘူးဗျ။
အဖေလေး ရခိုင်လည်း ပိစိလေးတောင် မပါပါဘူးဗျ။
ကချင်တွေ၊ ဝတွေ၊ ရှမ်းတွေ ပါပါတယ်ဗျ။
ကချင်တွေ၊ ဝတွေ၊ ရှမ်းတွေက လိမ်နေကြတာပါဗျ။
ကျနော်တုို့ တပ်မတော်က ဘယ်တော့မှ မလိမ်ပါဘူးဗျ။
အီး ဟီး ဟီး ဟီး။
သူများပြောရင် သူတုို့က ဘယ်တော့မှ မယုံကြဘူး။
အီး ဟီး ရွှတ် ဘွတ် (အီးထွက်သွားသည်။)
ကိုးကန့်အဖွဲ့နှင့် ရခုိုင်တပ်မတော်က ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေပါတယ်လုို့ ရခိုင်တပ်မတော် စစ်ဦးစီးချုပ် ဗုိုလ်မှူးချုပ် ထွန်းမြတ်နုိုင်က အကြိမ်ကြိမ် သတ္တိရှိရှိ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း DVB ကို ပြောပြနေတာ နားဆင်နုိုင်ပါတယ်။
This entry was posted on February 23, 2015 at 3:56 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “ကိုးကန့်အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေသည့် ရခိုင်တပ်မတော်ကို မေးမြန်းချက်”
February 23, 2015 at 5:26 am | Reply
ရက္ခိုင်တပ်မတော် မှ နိူင်ငံနှင့် လူမျီုးအတွက် ခံယူအပ်သော သစ္စာအဓိဌာန် ( ၅ ) ချက်
၁။ ငါရို့သည် နိူင်ငံနှင့် လူမျီုးအတွက် ထာဝရသစ္စာ ဟိပါမည်။
၂။ ငါရို့သည် အသက်နန့်ခန္ဒာ တည်မြဲနီသရွိ့ နိူင်ငံနှင့် လူမျီုးအတွက် အသက်ပီး ကာကွယ်လားပါမည်။
၃။ ငါရို့သည် တပ်မတော် မှ ပီးအပ်လာသော အမိန့်နှင့်တာဝန်ကို ကျီပွန်စွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမည်။
၄။ ငါရို့သည် နိူင်ငံနှင့်လူမျီုးအတွက် အသက်စွန့်လွတ်ခကတ်သော အာဇာနီတိအပေါ် သစ္စာဟိပါမည်။
၅။ ငါရို့သည် ဇာခါလေ့သင့် လက်နက်မချပါ။
သစ္စာအဓိဌာန် ပြုထားရေ တပ်မတော်
သွီးရောမပါ ရက္ခိုင်တပ်မတော် Arakan Army..
ရက္ခ ဇာနည် ။ ။
Aung Tin shared ရက္ခ ဇာနည်’s video.
ရက္ခိုင်တပ်မတော်မှ နိုင်ငံနှင့် လူမျိုးအတွက် ခံယူအပ်သော သစ္စာအဓိဌာန် (၅) ချက်